Dhageyso: Madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlay fashilka Alshabaab ka raacay Qaraxii ka dhacay Zoobe. – Xeernews24
Dhageyso: Madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlay fashilka Alshabaab ka raacay Qaraxii ka dhacay Zoobe.
19. Oktober 2017 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka hadlay Qaraxii musiibada ahaa ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan Isgooyska Zoobe.
Madaxweyne Geelle waxa uu sheegay in markii la’eego tanka Qaraxaasi uu ahaa mid culus, isla markaana uu dareemaayo in maleeshiyaadka Alshabaab ay u fuliyeen ciil ku uruuray aawgii.
Madaxweyne Geelle waxa uu tilmaamay inuusan arag misna maqal Qarax lamid ah kan ka dhacay Isgooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, waxa uuna ku sifeeyay mid ay Shabaabka ku goconeyso khasaarihii kasoo gaaray weeraradii lagu qaaday saldhigyadooda.
Waxa uu Geelle sheegay in markii ay Shabaabku arkeen inay guul darro soo wajahday, ay bilaabeen inaysan ayaguna waxba reeban, si ay niyadda uga dilaan shacabka Somaliyeed, ee rajada dowladnimada u soo iftiintay, sida uu hadalka u dhigay.
Geelle ayaa cadeeyay in maleeshiyaadka Alshabaab aysan ka fiirsan Qaraxaasi, waxa uuna sabab ka dhigay gumaadka loo geystay carruur, ciroole iyo dhalinba.
Waxa uu Geelle sheegay inuu fashilmay weerarka Alshabaab, kadib markii ay ku xasuuqeen dad shacab oo aan waxba galabsan
Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa xusay inay aad uga xanuunsadeen dhibaatadii ku dhacday shacabka reer Muqdisho, adduunkana aanay ka dhicin dhibaatadaasi oo kale.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/Ali-Sabieh.jpg 157 300 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-19 09:19:332017-10-19 09:19:33Dhageyso: Madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlay fashilka Alshabaab ka raacay Qaraxii ka dhacay Zoobe.
Xog lama filaan ah oo kasoo baxeysa Waxyaabihii saarnaa gaadhigii loo adeegsaday... Dhismo iyo dayactir laga bilaabay Wadada laamiga ee ku bur buray qaraxii Zoobe...